Dashain – RADHA PAUDEL
धोको फेरेर रुन नपाएको दशैँ
सधै झैँ झन्डै २६ वर्ष पहिलेको दशैँमा बिहान सातै बजे घरमा मार हान्न गाउका दाइहरु आए. करिब छ बर्ष देखि नै मैले मार हान्ने कुरालाई तिलान्जली गरिसकेकोले घर भित्रै बसिरहे. यसरी बस्नुको पछाडी म साहाकारी भएकोले मात्र होइन, म माइनस भएको थिय. बर्खे बिदामा घरमा आउदा मैले महिनाबरिको प्रकिया बाआमसंग छलफल गरिसकेकोले मेरो घरमा पहिले […]
Dashain, education, Literature
LeaveaComment on धोको फेरेर रुन नपाएको दशैँ
दशैँ संग भल्किरहने मन
आज भोलि बिस्लेशन गर्छु, बाहुन भएर पनि मेरो परिवार तेती धार्मिक भएँन. घर र मामाघर दुवै तिरका हजुरबा, आमाको भौतिक अनुपस्थिति, ठुलो परिवार, आर्थिक निम्नस्तर, बाहुन भए पनि कथित तल्लो जात. केटाकेटीको मन त हो नि, छिमेकिकोमा घरमा पाहुना आउने, मिठो मसिनो पाक्ने, अलिक स्वतन्त्र भएर हिडेको देख्दा कता कता कल्पनामा आउथ्यो – हामी कहाँ […]
LeaveaComment on दशैँ संग भल्किरहने मन